Insimu Iceland itholakala esiqhingini igama elifanayo, okuyinto onqenqemeni WaseYurophu futhi yenza i-Atlantic Ocean. Naphezu igama layo iqhwa, izwe akuyona Arctic, isimo sayo sezulu is sashintsha ngenxa iNorth Atlantic Drift eduze ogwini, Gulf Stream ayivumeli ukuvula esiqhingini ibe yihlane abandayo nge ice okuphakade.
Yiziphi izimo zezulu e Iceland?
Ngokuvamile singasho ukuthi ezisondelene nazo wezwe kuthé bhe, kodwa abahlala engxenyeni ephakathi ye-sezulu kanye nohlobo Iceland kubhekwe ezwekazini. Isimo sezulu esiqhingini kungashintshwa emva kwamaminithi ambalwa. Yilokho nje kwaba efudumele futhi ilanga lakhanya, wazithola abandayo kanye dank. Ngisho abendawo benza amahlaya ke, bathi: "Uma une into engenzi ivumelane sezulu yethu, linda imizuzu eyishumi nanhlanu, futhi ngeke kushintshe." Kuthinta sezulu Arctic ukukhukhuleka ice.
Izinkomba kwezulu ezweni lonke abahlukile njengoba izinga lokushisa, ngenxa zokuzamazama ezahlukene zezulu. Ngokwesibonelo, isabelo olusentshonalanga Iceland lina-100 kuya 1.500.000 mm enyakatho-mpumalanga ye-rate kungenzeka angaba ngu-700 mm ngonyaka, kodwa ezingxenyeni eningizimu yalesi siqhingi (emagqumeni) Izinkomba imvula bengase bazikhandlele kakhulu ngendlela kuze kube amamilimitha angu anamane amawaka.
Kodwa naphezu isimo sezulu esiguquguqukayo ezinjalo, ubunjalo Iceland idume ngobuhle bayo. On endaweni yayo ungathola izindawo eziningi yindoda, kungcono ezilele iqhwa eneziqongo noma ice amasimu Umkhawulo wama-bay. Impela, izivakashi kwi ezivulekile yalesi siqhingi inikeza eziningi ezithakazelisayo futhi engaziwa, kodwa izwe ngesikhathi travel akuyona emangazwa izimo zayo zemvelo, kungcono wazi kusengaphambili lokho umuntu sezulu awe yonke isizini.
Isimo sezulu ebusika
Winter emini ihlala kuphela amahora angaba mahlanu, bese kuza isikhathi kuya emnyama Iceland ngalesi sikhathi ngonyaka. Ubunjalo lonke isimo engaphansi ingcindezelo emimoyeni ebandayo enamandla. Inyanga nesithwathwa kakhulu kuyinto Januwari, izinga lokushisa ogwini emini ungaya phansi 0 degrees Celsius futhi ebusuku - kuze kufinyelele -4.
Nakuba ngalesi sikhathi sonyaka sezulu kunomoya hhayi obathandayo kakhulu, izivakashi namanje zithuthelekela izinkulungwane kulesi siqhingi ukubona lo mkhuba esiyingqayizivele yemvelo - Aurora Borealis. Isizini le ukuhlwanyelwa enyakatho Uthatha Okthoba kuya kuMashi yezwe futhi izivakashi zijabulela mhlawumbe emehlweni enhle kakhulu ukuthi kungabonakala kukho konke ukuphila kwami.
Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi isimo ngendlela emangalisayo Iceland idume Valley yayo Neziphethu okuyinto itholakala eningizimu yezwe. Amazinga yamanzi ngenye yalezi ezishisayo - ku eBlue Lagoon - bengase bazikhandlele 37 degrees Celsius. Lokho ukuza lapha ngokwabo Iceland nezivakashi nokuba zifudumale ebusika.
Isimo sezulu ngesikhathi entwasahlobo
Amazinga air ngoMashi uhlala iphansana, azungeze 3 degrees Celsius, kodwa inani kwezulu kakhulu incipha. Ngo-April no-May, kuba ufudumele futhi mercury isivele ephakama + 7-10 C emini. Okuningi ebusika ngasogwini siqhingi siqala ukukhukhuleka ice, inqubo ukuthi ihlala phakathi nayo yonke inkathi entwasahlobo e-Iceland. Imvelo lingasempumalanga yalesi siqhingi, naphezu lokushisa more cool, ungajabulisa izivakashi.
Ngo-April, uqale Cruises abahlebayo abahambi ngqo Greenland ngokwayo ukuze Grimsey Island. Abathandi izilwane zasendle ngalesi sikhathi sonyaka ungabukela imikhomo yohlobo lwe-humpback e Faxaflói Bay Hervey.
Entwasahlobo ka-Iceland namanje amaholide eziningi, okuyinto ahambisana Folk imikhosi. Njengoba sibungaza usuku ubhiya ngoNdasa, futhi ezinyangeni zokuqala kwentwasahlobo ihlala Lutheran Easter. Kulezi zinsuku, wenza ukubungaza izivakashi iwundlu lePhasika.
Isimo sezulu ngesikhathi ehlobo
Ehlobo izinga lokushisa likhuphuka kancane ukufudumala e-Iceland. Imvelo kanye sezulu kule nkathi, inani elihle kunawo yokuhamba neyezinye izinkambo azungeze lesi siqhingi. Ngakho-ke, inkathi, okuyinto Uthatha June kuya ku-September izinyanga, ubhekwa okusezingeni eliphezulu kulesi sifundazwe.
Isimo sezulu olufudumele isethwe esiqhingini ngoJulayi, lapho umoya sishisiswe 17 degrees Celsius emini ukufika ku-10 ebusuku. Izivakashi abanquma bahambela izindawo zokungcebeleka esiqhingini ehlobo ungabona lo mkhuba emangalisayo ye-Iceland. Nature ngeke ukubamangaza nobusuku obungamashumi amane akhe amhlophe eyoshiya okuvelayo alibaleke izinkumbulo.
Abathandi ukuzingela ethule ehlobo uzokwazi ukujabulela amaningi ukudoba, njengoba Gulf Stream olwandle edonsela izikole yonke ezihlukahlukene siklanyelwe ukuphila emanzini. Imifula yalesi siqhingi ungaxoxa salmon, esemgwaqweni enyangeni Septhemba. Ngokungangabazeki, futhi isikhathi esingcono indawo, futhi lapho kutadishwa lonke lelo zwe.
Isimo sezulu ekwindla
Ekuqaleni autumn libhekene sezulu namanje kuqhathaniswa efudumele futhi windless. Ngo-October, qala zasezindaweni edabula i-Atlantic Ocean kanye sezulu siba sibi kakhulu. Futhi ngo-November, ngenyanga emini isivele kakhulu ziyancipha futhi lesi siqhingi siqala isikhathi izinsukwana amnyama eside. Imigwaqo abahlala engxenyeni ephakathi ye siqhingi enyakatho yezwe ungavala ngenxa ukuvimbela, iqhwa nesithwathwa doti. Ngakho-ke, ebuthana isikhathi esithile esinikeziwe ukuze ihambe Iceland, kubalulekile ukulandela ulwazi mayelana nesimo sezulu isimo.
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona imizi Iceland
Lesi siqhingi ithakazelisa kakhulu izivakashi for namathafa ayo futhi ukuqhathanisa. Nature & Resorts Iceland abahambi umxhwele imilingo kwayo nobuhle abandayo. Ethandwa kakhulu kucatshangwa Reykjavik (inhlokodolobha isimo futhi idolobha elikhulu kunawo wonke) kanye Akureyri (kubhekwe ukuba inhloko-dolobha esenyakatho yezwe).
South Iceland kungaletha yeqhwa ethandwa izivakashi zabo Vatnayokudl, okuyinto enkulu kunazo zonke emhlabeni. Enye Luhambo kwale ngxenye yezwe ubhekwa ichibi glacial Yokulsaurloun.
Fans of the namathafa emangalisayo, elingenalo izimpawu impucuko yesimanje kungathatha hamba jeeps eduze ezinkangala ezimaphakathi ye-Iceland, okuyinto cishe ihlalwe.
iminyuziyamu wezwe futhi amaqiniso athakazelisayo
Isimo kungaba ukuheha izivakashi eziningi ezivela emhlabeni wonke. Iceland ezikhangayo - nemvelo, iminyuziyamu, amatshe ezikhumbuzo nokuningi. Ngokwesibonelo, e Husavik kukhona engenzi nzuzo, okuyinto lavulwa ngo-1997. Ayemaningi izifundo ezihlukahlukene ukuthola ulwazi oluningi mayelana imikhomo. Futhi ngaleso sikhathi, ngakho-ke sasingekho lonke Museum anikezelwe izilwane zasemanzini ezincelisayo.
Reykjavik kuyinto igalari izithombe, kukhona izithombe ezahlukene abangaba yizigidi ezingu-5. Imibhalo emidala kunayo yonke kubhekwa wenza ngo-1870. Baqoqa zonke amaqiniso athakazelisayo mayelana amasiko ye-Iceland.
Kuyini ezithakazelisayo wukuthi abantu base-Iceland abanazo izibongo, bona esikhundleni patronymics - kungcono into efanayo igama phakathi kwezizwe Slavic. Uma ngokungazelelwe uyise, ngoba noma ngabe yisiphi isizathu, ayiboni ingane ke igama lakhe phakathi, yena uthola nonina, okungukuthi matronym.
Izakhamuzi Reykjavik kalula ukuyothenga esitolo esiseduze begqoke ezokulala noma izingubo zakho ekhaya, futhi Akubonakali kuyinqaba kunoma ubani.
Iceland iyona edumile kakhulu ayingcosana izwe emhlabeni, ngoba uhlala ecishe ibe yizinkulungwane 320. Man. Uma eqhathaniswa zeminyaka seMpi yoMhlaba yesiBili, kuba ngisho okuningi, ngoba ngalezo zinsuku lizwe ugcwale angaba yizinkulungwane 50. Inani labantu base-ngalesi simo ubhekwa kakhulu ukufunda isizwe emhlabeni, bona kakhulu othanda izincwadi.
Kungakhathaliseki ukuthi okwesabisayo kulelizwe abandayo sezulu layo ungenakunqotshwa kanye nokuncibilika kwezinguzunga zeqhwa, okungenani kanye empilweni yakhe efuna ukuvakashela abahambi eziningi abathandi adventure.
Ihlosi lase-Amur: amaqiniso athakazelisayo mayelana isilwane
Lapho "windose 10" control panel nokuthi ukuze uyivule?
Ukuncishiswa - ithuba!
Indlela wean ingane ekuguleni: iseluleko esisebenzayo
Tank "Leopard-1": Umhlahlandlela, ukubuyekeza, isithombe, ukubuyekezwa
Umfundisi omkhulu wesonto - ke ... Lezinzalamizi yeRussia. Umfundisi omkhulu wesonto Kirill
Kuyini Retro-ibhonasi ukuhweba? Isampula Retro-ibhonasi. Ukubalwa Retro amabhonasi. Retro-ibhonasi - kungcono ...
Cytomegalovirus ukutheleleka: izimpawu ezinganeni kanye nokwelashwa